စာသင်တဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ကို ထောင်ချောက်ဆင် လုပ်ကြံဖို့ တိုင်ပင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ (ရုပ်သံ) - Grand Parents-Day
Home / News / စာသင်တဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ကို ထောင်ချောက်ဆင် လုပ်ကြံဖို့ တိုင်ပင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ (ရုပ်သံ)
စာသင်တဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ကို ထောင်ချောက်ဆင် လုပ်ကြံဖို့ တိုင်ပင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ (ရုပ်သံ)
ကလေးဆိုတာ ဘာမှ မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာကို လုပ်တာ သဘာဝတစ်ခုပါပဲနော်။ ကိုယ်တွေငယ်ငယ်ကလည်း အမြဲပေါက်ကရတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား…….? အခုဆိုရင် ချစ်စဖွယ်ကလေးငယ်လေးတွေ သူတို့ရဲ့ကျောင်းဆရာလေးကို လုပ်ကြံဖို့ လုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ ကလေးတွေဟာ ကျောင်းဆရာလေးကို လုပ်ကြံဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ကျောင်းဆရာလေး မိသားတော့ ကလေးတွေကို ခေါ်ပြီး မေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါပဲ။
ကျောင်းသားလေးမောင်ကောင်းက သူလုပ်ခဲ့တာကို ဘယ်လို ဖုံးကွယ်ပြီးပြောဆိုမလဲ ……? ဆရာလေးကရော သက်သေတွေနဲ့ ဖော်ထုတ်ပြတဲ့အခါ ကျောင်းသားလေးတွေ ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ ……. ?ကလေးတွေရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ အပြုအမှုလေးတွေဟာ ကိုယ်တွေက ငယ်စဉ်ဘဝလေးကို ပြန်ပြီး မြင်ယောင်လာပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရင်း တခြားတွေးမိတာက နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ပညာရေးပါပဲ။ ကလေးငယ်တွေကို လွတ်လပ်စွာ တွေးတောခွင့်ပေးထားတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ ပုံစံလေးလည်း ဖြစ်လို့ ကျောင်းဆရာလေးကို ချီးကျူးမိပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှုလေးကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမှုတွေရရှိပါစေနော်…………..။
ကလေးတွေရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ အပြုအမှုလေးတွေဟာ ကိုယ်တွေက ငယ်စဉ်ဘဝလေးကို ပြန်ပြီး မြင်ယောင်လာပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရင်း တခြားတွေးမိတာက နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ပညာရေးပါပဲ။ ကလေးငယ်တွေကို လွတ်လပ်စွာ တွေးတောခွင့်ပေးထားတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ ပုံစံလေးလည်း ဖြစ်လို့ ကျောင်းဆရာလေးကို ချီးကျူးမိပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှုလေးကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမှုတွေရရှိပါစေနော်…………..။CRD- ME(Shwe Yaung Lan),Video Source : ငပြူး